Tamin-kafaliana no nandraisan'ireo mpiara-miasa aminy tao amin'ny sampana "Radiologie" HJRA azy omaly. Nirantiranty ny sora-baventy amin’ny teny vahiny hoe : « Welcome back» na hoe: “Tonga soa indray” nentina nitsenana ity Profesora ity, izay niteraka adihevitra ho an’ny mpanara-baovao ny fanesorana azy. Midika izao, fa na tsy tonga lafatra aza ity minisitra teo aloha ity tamin’ny asany sy ny andraikitra notanany, dia nanao ny ainy tsy ho zavatra, notohanan’ny besinimaro ny zavatra nataony,… Tsy mba izany kosa ny setriny ho an’ny Mpitondra firenenana fa fanesorana satria tsy nifaranaraka tamin’ny kajikajy politikany ny nataon’ny minisitra fa mety niasa tamin’ny maha teknisianina sy siantifika azy. Maro ny naneho ny alahelony sy ny hatezerany tany anaty tambajotran-tserasera tamin’ny fanesorana ity minisitra ity, saingy mandalo tokoa angamba ny toerana. Tsy izay tian’ny vahoaka rahateo no atao, raha ny fihetsika sy hafatra ankolaka tian’ny Fanjakana haseho, saingy hafa ihany ilay hoe : aleo halan’andriana, toy izay halam-bahoaka e !